Landy Rodriguez & Herrera Correa Assel, oo ah laba dhakhtar oo laga afduubtay Kenya bishii Abriil 2019, ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin eheladooda waxayna ku baaqeen in la xoojiyo qorshayaasha sii deynta.
Dhamaadka sanadka 2020, dhowr jeer ayaa la isku dayay in la soo furto dhaqaatirtan, laakiin ma aysan suuragalin, waxaana markii dambe ku soo biiray dowladda Soomaaliya.
Warbixin la soo saaray Oktoobar 2020 ayaa lagu sheegay in madaxfurasho la siiyay Al-Shabaab iyo in la sii daayay labada dhakhtar, laakiin waxaa diiday wasiirka arrimaha dibadda Cuba Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla.
Sanad & sagaal bilood kadib markii la xiray dhaqaatiirta, eheladooda waxay dalbadeen in lasii daayo, maadaama aysan ka warqabin noloshooda iyo xorriyadooda.
Ayuu yiri Afhayeenka Kenya Xogta aan helayno waxay tahay in dhakhaatiirtii la afduubay ay wali nool yihiin, waxaa socda hawlgal ay wadaan ciidamada Midowga Afrika si ay u soo badbaadiyaan, nasiib daro waqtiga ayaa nala dheeradey..
Miguel Díaz-Canel ayaa dhowr jeer taleefanka kula hadlay Uhuru Kenyatta, faahfaahinta wadahadalkooda wuxuu ku saabsanaa sii deyntiisa, saddex bilood ka horna waxay ka wada hadleen suurtagalnimada sii deynta dhakhaatiirta Cuba.
Dowladaha Havana iyo Nairobi ayaa ku guul darreystay inay Muqdisho u soo bandhigaan kaalin lagu badbaadinayo Landy & Assel oo gacanta u galay koox ka tirsan al-Shabaab oo la rumeysan yahay inay gacanta ku hayaan Soomaaliya.
Waqti ka waqti ayaa lala sameeyaa xiriir toos ah, waxaana dhaqdhaqaaqa xoogan waxaa hogaaminaya Wasiirka Arimaha Dibada ee Cuba Bruno Rodriguez, iyadoo uu ka qeyb qaadanayo Wasiirka Caafimaadka Angel Portal, sida ay warbixintu sheegeyso.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa dhawaan qoray in 100 dhakhaatiir reer Cuba ah oo ka shaqeeya magaalada Nairobi ay helaan lacag buuxda $ 9,220 Bil kasta, tani waxay horseeday inay kordhaan tirada dhakhaatiirta ku sugan Kenya.
Sarkaal ka tirsan Al Shabaab ayaa wakaaladda wararka ee EFE u sheegay in ay ku jiraan gacanta dhaqaatiirta Cuba.
Xigasho: Diario De Cuba / Axadle.